Tag: usoro ndụ ndụ | Martech Zone
Tag: usoro ndụ ndụ
Ihe karịrị afọ iri gara aga, mụ na ụfọdụ ọrụ SaaS rụkọrọ ọrụ - gụnyere ịrụ ọrụ dị ka onye njikwa ngwaahịa maka Scott McCorkle na ọtụtụ afọ dịka onye ndụmọdụ mwekota na-arụ ọrụ na Dave Duke. Scott bụ onye na-agbanwe agbanwe nke na-emeri ihe ịma aka ọ bụla. Dave bụ onye njikwa akaụntụ na-agbanwe agbanwe na-enyere ndị otu kachasị na ụwa aka iji hụ na atụmanya ha gafere. Ọ bụghị ihe ijuanya na ha abụọ jikọtara ọnụ,
Na Tọzdee, Septemba 3, 2013 Tọzdee, Ọktoba 31, 2013 Jenn Lisak Golding
Anyị enweela ihe omuma a na ọrụ ruo nwa oge, anyị nwere obi ụtọ banyere ihe atụ na ọdịnaya ahụ. N'ihi mmekota na ndi otu anyi na DK New Media, Ndị na-akwado ngwanrọ ngwanrọ anyị na-akwado na Right On Interactive (ROI), na onyinye dị ịtụnanya nke Ryan Howe na Henchmen Comic, anyị nwere obi ụtọ ikpughe Super Powers of Lead Scoring. Nchịkọta isi abụghị ihe ọhụrụ, mana ROI nwere isi okwu dị iche